एक रोजगार सम्झौता को अवधारणा
व्यवस्था, नियामक अनुपालन
अवधारणा एक रोजगार सम्झौता को श्रम कोड मा मिलाएका छौं। यसको कोर मा, यो एक सम्झौता, निष्कर्ष छ जो कर्मचारी र कर्मचारी को। यस मामला मा, दुवै दल आपसी दायित्व र अधिकार भएको। कर्मचारी केही कार्यहरु यसको स्वीकृति घोषणा। तिनीहरूले आफ्नो विशेषता र आफ्नो संवाददाता योग्यता स्तर अनुसार कार्यहरू गर्न सम्बन्धित। बारी मा, अन्य पक्ष - को कर्मचारी काम को लागि वित्तीय क्षतिपूर्ति तिर्न र रूसी संघ को कानुनी र नियामक प्रेरित पूरा अवस्था सिर्जना गर्न बाध्य छ।
एक रोजगार सम्झौता को अवधारणा पनि कर्मचारी सामाजिक लाभ को प्रावधान समावेश छ। यस सन्दर्भमा, यो सम्झौता भन्दा कर्मचारी थप स्वीकार्य छ नागरिक व्यवस्थाको।
सम्झौता त्यस कागजातको परिचय को मुख्य बुँदाहरू आफ्नो को वैधता को लागि एक आवश्यक सर्त मानिन्छ छ:
- नाम कर्मचारी र कर्मचारी;
- दुवै दल को पहिचान प्रमाणित कागजातहरू विवरण;
- कपन (हाकिमहरूले लागि);
- त्यहाँ एक थियो जहाँ मिति र स्थान एक सम्झौता को निष्कर्ष।
एक रोजगार सम्झौता को अवधारणा को नियोक्ता जिम्मेवारी एक नम्बर को बिछाउने समावेश छ। यी समावेश:
- परिणाम श्रम कार्यहरु अनुसार काम को प्रावधान;
- श्रम कोड, साथै अन्य कानुनी र नियामक प्रेरित लागि प्रदान काम अवस्था सुनिश्चित गर्न;
- सर्तहरू र कामको लागि क्षतिपूर्ति भुक्तानी रकम अनुपालनको।
एक रोजगार सम्झौता को अवधारणा कर्मचारी मा केही जिम्मेवारी imposes। ती हुन्:
- आफ्नो व्यावसायिक गतिविधिहरु को प्रदर्शन निजी सहभागिता;
- अनुपालनको आन्तरिक नियमहरू, उद्यमी मा संचालित छ।
यी नियमहरू सबै लेख पचास-छ को LC आरएफ को बाहिर सेट छन्।
काम मा सम्झौता, लिखित ढाँचामा बाहिर नक्कली मा - यसको पक्ष को हस्ताक्षरकर्ता प्रत्येक लागि एक। यो अन्य कार्यहरू भन्दा छ लाभ मा एक रोजगार सम्झौता को अवधारणा छ। हाकिमहरूले र कर्मचारीहरु सबै आवश्यक अधिकार र कर्तव्य स्वीकृत र दुवै पक्ष लागि आवश्यक छ, जो एक कागजात, वर्णन। यो कार्य श्रम विवाद को घटना मा कानुनी प्रावधान संग सम्झौता को धेरै सजिलो तुलना जडानमा।
खातामा सबै आवश्यक सर्तहरू लिदा रोजगार सम्झौता अवधारणा र महत्व अधिक महत्वपूर्ण हुन्छ। तथापि, शक्ति मा कानून द्वारा अनुमोदित आफ्नो संरचना, आवश्यक सम्झौता समावेश हुनुपर्छ।
आवश्यक करार, मामलामा यो निष्कर्षमा पुग्न गर्न असम्भव छ, जो बिना, निम्नानुसार छन्:
- नाम कर्मचारी र कर्मचारी (वा कानुनी संस्थाहरू लागि आफ्नो नाम);
- संरचनात्मक एकाइ र काम को स्थान को एक संकेत;
- मिति भएको कर्मचारी आफ्नो कर्तव्य को कार्यान्वयन सुरु हुनुपर्छ;
- यो पेशामा, अनुसार को संग तोकिएको छ जो योग्यता को विशेषताहरु को विशिष्टीकरण संग विशेषता र स्थिति को नाम स्टाफ ;
- जिम्मेवारी र को कामदार को अधिकार र कर्मचारी;
- यो विशेषता अवस्था कार्यस्थल मा अवस्थित, साथै उत्पादन प्रक्रियाको खतरनाक कारक को मामला मा भुक्तानी लाभ र क्षतिपूर्ति रूपमा;
; श्रम समय र रिक्त स्थान मनोरञ्जनको लागि अभिप्रेरित को मोड -
- व्यावसायिक गतिविधि को परिणाम मा ब्याज को अक्रूअल लागू जो अवस्थाको;
- यो अवस्था र जो रोजगार सम्झौता एक ग्यारेन्टी रूपमा कार्य सामाजिक लाभ को प्रकार।
कर्मचारी र कर्मचारी बीच अवस्था कार्य परिवर्तन हुनुपर्छ मात्र लिखित रेकर्ड गरिएको छ कि आपसी सम्झौता गरेर। जुन बेलामा अवधि रोजगार सम्झौता पाँच वर्ष बराबर अवधि सीमित हुन सक्छ। यसलाई अनिश्चितकालीन सम्झौताका साइन दिनुभयो।
मामिलामा, आफ्नो सुविधा र उद्देश्य को nomenclature को प्रकार
अर्पण: विशेष निष्कर्षमा
बच्चालाई जन्म प्रमाणपत्र कसरी प्राप्त गर्न
किन भूमि कुनै वस्तुको मूल्य?
उहाँले सैन्य मा चिकित्सा बोर्ड छ भने के रंगरुट थाहा हुनुपर्छ?
सार्वजनिक क्षेत्र कर्मचारीहरु लागि थप तलब वृद्धिमा
मुखासे पछि Scars, र तिनीहरूलाई कसरी लड्न
सडक चिन्ह भएको SDA मा पार्किंग भुक्तानी
टेलिभिजन मा multiplex के हो
मोटर गाडीको अगाडीको शिशा वशर। यो कहाँ छ? मर्मतका र मरम्मत। वशर मोटर
को glans र foreskin मा रातो स्थलहरू: कारण के हो?
व्यापक फिल्मको साथ एक अमेरिकन फिल्म अभिनेता डिलन म्याकडर्मोट
के राम्रो छ: परिभाषा
एक Atoll के हो? संरचना र गठन को कदम
व्लादिमीर बयको - एक राजधानी पत्र संग एक मानिस
रङ लचीन्सको जटिल उपचार
अभिनेता मिखाइल Ulyanov: जीवनी, परिवार, Filmography